အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇွန် ၂၀၁၆ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇွန် ၂၀၁၆
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇွန် ၂၀၁၆
Posted by kai on Jun 4, 2016 in Editor's Choice, Myanmar Gazette | 35 comments
ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်း ပယ်ဖျက်ရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတည်ပြု
သတင်း ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး
21 hours 36 minutes ago Fri, 06/03/2016 – 16:49
Hits: 16365 times
နေပြည်တော်(ဇွန်လ ၃ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်)။ ။ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအရ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းနှင့် ဧည့်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျက်ရန် ဇွန်လ ၃ရက်က အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုလိုက်သည်။
တတိယအကြိမ်မြောက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကြမ်းတွင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းဟူသည့် ပြဌာန်းချက်အား ပယ်ဖျက်ရန် အတည်ပြုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းအား ပယ်ဖျက်မည့်အပေါ် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်အမတ်များက ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း စက်ခလုပ်နှိပ်မဲခွဲကာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဧည့်စာရင်းမတိုင်တာနဲ့တင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အရေးယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာက လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်ထားသူတစ်ဦးက မိမိနိုင်ငံထဲမှာ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိခိုက်တာမျိုး မရှိသင့်ဘူးလို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကလည်း သဘောတူတယ်။ ဒါကြောင့် ဧည့်စာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုဒ်မတွေအားလုံးကို ပယ်ဖျက်လိုက်တယ်” ဟု ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအား တတိယအကြိမ်မြောက် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သူ ပဲခူးတိုင်း၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)မှ ဦးမင်းဦးက ပြောသည်။
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကမူ အဆိုပါ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်ကို ပယ်ဖျက်ပါက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုကာ ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
ယင်းနောက် လွှတ်တော်တွင် စက်ခလုတ်နှိပ်မဲခွဲခဲ့ရာ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းဟူသည့် ပြဌာန်းချက်အား ပယ်ဖျက်ရန် လွှတ်တော်အမတ်အများစုက ဆန္ဒပြုသောကြောင့် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းကို ပယ်ဖျက်ရန် လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုပဲကန့်ကွက်၊ ကန့်ကွက် ကိုယ်စားလှယ်အများစုရဲ့ သဘောဆန္ဒအရ လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တာပါပဲ” ဟု တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီး လှဝင်းအောင်က လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ပြောသည်။
အတည်ပြုလိုက်သည့် ယင်းဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောထားကွဲလွှဲမှုများရှိပါက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဆက်လက်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
– See more at: http://www.mizzimaburmese.com/article/14844#sthash.vfNDHEiq.dpuf
သူတို့ဆွဲစိချင်သူကိုအချိန်မရွေး
ဘယ်ဒုစရိုက်သမားမှ ဧည့်စာရင်းတိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး
အာရုံစား မခံနိုင်တဲ့ သမရိုးကျ လူတွေသာ
ငွေကုန် အချိန်ကုန်ခံပြီး တိုင်နေကြတာ
ဟုတ်ပ အချိန်ကုန်လူပန်း နဲ့
ရိူးရိုးသားသားနေထိုင်နေလို့ သွားတိုင်တဲ့သူတွေကျတော့ အရစ်ခံရတယ်
“နောင်ကျင်းပမယ့် အခမ်းအနားတွေမှာသူ့အတွက်ထိုင်ခုံကို သီးသန့် မပြင်ဆင်ထားဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ပြော”
(ကျွန်တော့်ခုံက ရှေ့မှာ သီးသန့်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်၊နောင်ကိုတော့ ကြွရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေနဲ့ တစ်တန်းတည်းထိုင်လိုပါတယ်၊)
နေပြည်တော် ဇွန် ၅ ရက် ။ ။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က သူတက်ရောက်မယ့် အခမ်းအနားတွေမှာ သူထိုင်မယ့် ထိုင်ခုံအတွက် ပွဲ စီစဉ်သူတွေက သီးသန့် မပြင်ဆင်ထားကြဖို့ သည်ကနေ့မနက်ကပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က
“ကျွန်တော်လည်းဝင်လာမှပဲ မြင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ခုံက ရှေ့မှာ သီးသန့်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်၊နောင်ကိုတော့ ကြွရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေနဲ့ တစ်တန်းတည်းထိုင်လိုပါတယ်၊စီစဉ်တဲ့သူတွေ သတိပြုမိအောင်ပါ”လို့ ပြောပါတယ်။
သည်နေ့ (ဇွန်လ ၅ရက်က)နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်(၁)သဂ်ဟ ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၁၆ခုနှစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့ အခမ်းအနား ရဲ့ အဖွင့်မိန့်ခွန်းမပြောခင်မှာ အခုလိုမှာကြားတာဖြစ်ပါတယ်။
သည်အခမ်းအနားက နိုင်ငံတော် သမ္မတ အဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်တဲ့ သမ္မတအိမ်တော်ပြင်ပ အခမ်းအနားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Author/Photo – ဖေသက်ထက်ခင်
ဒီနေရာမှာ ၂ မျိုးတွေးလို့ရတယ်။
၁။ တကယ်ဟိတ်ဟန်မလုပ်ဘဲ အများနဲ့တစ်တန်းထဲစိတ်ကြောင့် ဟုယူဆလို့ရတယ်။
နောက်တစ်မျိုးက ဒီလိုတွေးမိတယ် (ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဗျာ)
၂။ ဥပမာ တစ်ခုပြောမယ် ရွာတစ်ခုမှာ ဦးသာလှဆိုတဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိတယ် အဲသည်သူက သူဖာသာဘာမှ ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရကြရှာဘူး တစ်ခုခုဆို သူဇနီး မယ်မြကို ပြန်ပြောပြပြီး မယ်မြက လုပ်လိုက် ဆိုမှ လုပ်ရဲသလို မယ်မြက ရှင်သွားမလုပ်နဲ့ဆို ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးပေါ့။ ခက်သာက ဦးသာလှက အဲရွာမှ အသက်အရွယ်ကြီးဖြစ်လေတော့ တစ်ရက်ရွာဦးကျောင်းဆွမ်းစားရုံအမိုးပြင်ဖို့ ရွာသူကြီးအိမ်မှာ စုကြပါလေရော ဦးသာလှက အသက်အရွယ်ကြီးသမို့ရှေ့ဆုံးမှာနေရာအပေးခံရပေမယ့် ဦးသာလှ တစ်ယောက် ထိုင်နေရင်းစိတ်ထဲတော့ “သူကြီးစကားနိဒါန်းပြီး ကဲ ကဲ ဘယ်သူတွေ အလှုငွေ ဘယ်လောက်ထဲ့မလဲ မေးချလိုက်ရင် ငါဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲ မယ်မြ သွားတက်ပါဆိုတော့လည်း သူက ရှင်သွားလိုက်ပါဆိုလို့သာ လာရတာ ခက်တော့ခက်ပြီ” ဆိုပြီး သူသိမ်ငယ်စိတ်ကြောင့် ရှေ့ဆုံးထိုင်ရတာ ကျောမလုံရှာဘူးလေ သူမှာ ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှမရှိသာကိုး။ ဒါနဲ့ဘဲ အဲဒီစုံတွေ့ပွဲလည်းပြီးရော ဦးသာလှက သူကြီးပြောတယ်တဲ့ သူကြီးရာ နောက်ရပ်ကျိုးရွာကျိုးဆုံတဲ့ပွဲကျ လူငယ်တွေရှေ့တန်းတင်စမ်းပါ ကျုပ်တို့က အသက်အရွယ်ကြီး တော့သူတို့ကို နေရာပေးရမှာမဟုတ်လားဗျ ကျုပ်တို့က နောက်ကထိုင်ရလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ လို့သူသိပ်ငယ်စိတ်ကို ဖုံးတဲ့စကား ဆိုခဲ့လေသတဲ့ဗျာ။
ခက်လယ် ကိုခ၊ ခက်လယ်။ :-)))
အလုပ်ခွဲဝေ လုပ်ကိုင်ခြင်း သဘောကို နားလည်အောင် မြင်ကြည့်စမ်းပါလေ။
ကိုခ ဥပမာ ကို ပြန်ကောက်ရင် –
ထွက်ငွေ တစ်ခု အတွက် ဘဏ္ဍာကျွမ်းကျင်သူ တနည်း ငွေကိုင်သူ ဆီက အမိန့်စောင့်ရတာ အဆန်းလားရှင်။
အဲဒီလို ပြန်တိုင်ပင်ရတာကို သိမ်ငယ်တယ် ထင်ရင်ဖြင့် ထင်သူ မှာ အငုံစိတ် တစ်ခု ရှိလို့သာပါ။
ကိုယ်လဲ မပိုင်နိုင် မကျွမ်းကျင်ဘဲ သူများ အပြောခံရမှာစိုးလို့ ဆ ဆရာကြီး ပုံ ဟန်လုပ်ပြနေသူဟာ မိသားစုမှာ (သို့) အဖွဲ့အစည်းမှာ (သို့) နိုင်ငံမှာ ကန့်လန့်တိုက်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို လူတွေကြောင့် အောင်မြင်ဖို့ ပြေးလမ်းကြောင်းမှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နိုင်သူ၊ လုပ်တတ်သူ ကို ခေါင်းဆောင်တင်ပြီး စကားနားထောင်ရတာ ရှက်စရာ လို့ ကို မထင်ပါ။/မထင်ရပါ။
ကိုယ့်ထက်သာအောင် အလုပ်လုပ်တတ်သူကို လုပ်ဖို့ နေရာမပေးဘဲ ကပ်နေတာ ကသာ ရှက်စရာပါ။
မယ်မြ တစ်ယောက် လမ်းမှာ ကားမောင်းရင်း ကားပျက်ရင် ယောကျာင်္းဦးသာလှ ကို နေရာပေးပြီး အားကိုးတကြီး ခေါ်မှာ အသေအချာပါ ကိုခရာ။
သူတို့ အိမ်ထဲ ဘယ်သူ က ဘယ်လို ဘာတာဝန်ခွဲ အလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ကျွန်မတို့ အပြင်လူတွေက အားလုံး သိတာ လိုက်လို့ရှင်။
သူကြီးတို့ တိုင်းပြည်မှာ အင်မတန်ထက်မြက် လှတဲ့ နာမည်ရှိပြီး မိန်းမ သမ္မတလောင်း ကို နေရာ မပေးချင်တဲ့ သူတို့ ပါတီ က လက်ဝဲစွန်းကြီး တစ်ယောက် ကန့်လန့်တိုက်နေလေရဲ့။
အဲဒီ မိန်းမ ကဘဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ် က သူ့ပါတီတွင်း ပြိုင်ဘက် ကို လိုလိုလားလား နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့တာ တကယ်တော့ ညံ့လို့ မဟုတ်ဘူးလေ။
အသံ မတူ မညီမညာ အကွဲအပြဲ မဖြစ်ချင်လို့ အများအတွက် ကိုယ့်အတ္တကို နောက်ချန်ခဲ့တာ။
Clinton to Sanders: I dropped out for Obama – it was ‘the right thing to do’.
မိသားစု/ အဖွဲ့အစည်း/ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်မှု တွေမှာ ဟိုသူက ရှေ့ ဒီသူက နောက် ပုံစံ ကို နဲနဲ ချဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလို့စ်။ :-)))
ဟိုး အရင်တုန်း က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆီမှာ အားကိုးရသူတွေ မရှိလို့ သူကြီး ပြောတိုင်း ကျွန်မ ပြန်ပြန်ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
နာမည်မပေါ်လွင်စေဘဲ အလုပ်လုပ်ပေးနေသူ လူတော် ပညာတတ် (ဟားဗတ် ဆင်းတွေတောင် ပါသေး) တွေ အများကြီးပါလို့။
တစ်ချို့ ကျွန်မ တို့ အရွယ်တွေပါ။ သူတို့ က အခုလဲ လူရှေ့ထွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဦးထင်ကျော် တောင်မှ မဖြစ်သာလွန်းလို့ ထွက်လာရတာ နေမှာ။
ပြည့်တဲ့ အိုးတွေ ဘောင်ဘင်မခတ်ပါ။ အဆံရှိတဲ့ စပါးနှံ ကိုင်း ပါတယ်။
အဲဒီလို လူတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နားမှာ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အပြင်က ဘာမဟုတ် တဲ့ အဆံချောင် တွေ စကားသံကြားရတာ အတော် နားခါးလှတယ်။
Hackers claim hijack of Mark Zuckerberg’s social-networking account
June 5, 2016 2:18 PM PDT
Ourmine,ahacker group with 41,000 followers on Twitter, claimed Sunday to have compromised the Facebook CEO’s Instagram, LinkedIn, Pinterest and Twitter accounts. Zuckerberg’s verified Twitter account appears normal at this writing, but Engadget posted images showing it defaced.
၂၀၁၆ ဧပြီလ နောက်ပိုင်းမှ စ၍… မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများအတွင်းမှာ…
အများစုနှင့် ဒီမိုကရေစီ အနိုင်ကျင့်မှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း… ကြိတ်မနိုင်ခဲမရတောက်ခေါက်သူများထံမှ သိရှိရပါသည်။
David Doyle, Rangoon
8 June 2016 • 8:23pm
“OMG [oh my god] who serves Lipton Tea for State Dinner! Suchadisgrace,” he wrote on Facebook. “It should be at least Twinning’s (sic) Earl Grey or Fortnum and Mason’s Queen Anne Tea.”
He wrote: “I expect the Old Girl to have more fine taste than that. She should definitely not advice (sic) when it comes to Tea at least. And don’t give me the crappie (sic) excuse that we should save money when you can get Twinning’s (sic) at local City Mart for $13 (£9) per 20 teabags.”
Best comment of that article::::
“Seriously? Cheap is when one’s family bankrupts the entire Myanmar economy,” wrote May Thu Khine.
ဒီမိုစနစ် စစ်ချင်ရင်တော့လဲ သူ့အမြင် သူ့အတွေး ပြောလို့ ရပါစေ လို့ ဘဲ ပြောရမှာပါ။
ဒီတော့ ဒီ စကော့ပီယန် လေး လဲ ပြောချင်တာ ပြောပါစေတော့။
အပြောမတတ် ပညာ မပါ ရင်တော့ ၁၀ပြားလိုတို့၊ တစ်မတ်လိုတို့၊ ငါးမူးလိုတို့ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြ ပေါ်လွင်ပြီး ဖြစ်မှာပေါ့။
ဒီမှာ ဘာကို သွားတွေးမိလဲ ဆိုတော့ ကျေးညီနောင် ကိုဘဲ။
သူခိုး ဓားမြ လက်ထဲ ရောက်သွားတဲ့ ဟာလေး က ရိုင်းပြီး ရသေ့တွေ ကျောင်းကို ကျသွားတာလေး က ယဉ်ကျေးပေါ့။
ထပ အဘ နဲ့ ပေါင်းမိသူမှာ ဟို က သွေးထိုးတော့ အရိုင်းစိတ် နဲ့ ပြည်သူ့ အချစ်တော် ကို စော်ကားပြီးရင်း စော်ကား။
ဘလ ငှက်ကထ ဆီ ခြေချ မိလိုက်တဲ့ ဘောကြိုက် တဲ့ ဟာလေး ကတော့ ဆွဲဆောင် ဖျောင်းဖြကောင်းလို့ထင့်။ အထူအပါး နားလည်ပြီး နာမည်ရဖို့တောင် ကြိုးစားလို့။
ဒါလေး တွေ ကို နမူနာ ယူကြ အပြင်က ငါ့ရှင်တို့။
ဆ ဆရာကြီး တွေ သိပ်လုပ်ပြချင် မနေ နဲ့။
အတွင်းထဲ က လူ တွေထဲ အချဉ်မဟုတ်သူတွေ အများကြီး။
သူတို့ ဆီက ဘာအသံမှ ထွက်ပြ နေတာ မဟုတ်ဘူး။
သူတို့ အလုပ် သူတို့ အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ် နေကြတာ။
အတော်များများ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ယုံကြည် သူတွေချည်းဘဲ။
စကား ဇွတ် စပ်၊
ထမင်းဆိုင် အတွက် ဒီ လ ရပလားး??
မရသေးရင် ရှက်ဂျူးထဲက ယူလိုက်တော့။
ဘန်ကောက် အနှိပ်ခန်းဝင်စီး၊ လိင်အလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်တွင် မြန်မာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင် (ရုပ်သံ)
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်က အနှိပ်ခန်းတခုကို ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေက ဇွန်လ ၇ ရက်က ၀င်ရောက်စီးနင်း ရှာဖွေရာမှာ လိင်အလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ဖမ်းမိပြီး အဲဒီထဲက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကာ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် မိန်းကလေးတွေပါ လူကုန်ကူးခံရတယ်လို့ သနေရှင်း ထိုင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဟွေ့ခွမ်မြို့နယ် ရာ့ခ်ျဒါးဖိဆစ်နယ်မြေရှိ Nataree Massage Enteratainment အမည်ရ အနှိပ်ခန်းတခုမှာ အသက်မပြည့်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို လိင်အလုပ်သမားအဖြစ်စေခိုင်းကြောင်း စုံစမ်းသိရှိချက်အရ ထိုင်းပြည်ထဲရေးဌာန၊ လူကုန်ကူးမှု နှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ နယ်မြေခံရဲ၊ စစ်တပ် နဲ့ NVADER အန်ဂျီအိုတို့ ပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းအင်အား ၁၀၀ ကျော်က ဇွန်လ ၇ ရက် ည ၈ နာရီအချိန်က ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာလို့ ထိုင်းနိုင်ငံအထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့ဥပဒေရေး ရာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး နိုင်းဖိရိယ ချန်တထိလုတ်က ပြောပါတယ်။
ဒီမတိုင်ခင် အဲဒီအနှိပ်ခန်းမှာ အသက် ၁၆ နှစ်ရွယ် မိန်းကလေးတဦး လိင်အလုပ်သမား အဖြစ်ခိုင်းစေခံနေရကြောင်း တိုင်ကြားချက်အရ NVADER အဖွဲ့က ထိုင်းလူကုန်ကူးမှု နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ကို အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူတွေက ၃ လကြာ စောင့်ကြည့်ပြီး ဧည့်သည်အဖြစ်အယောင်ဆောင်ကာ အတွင်းပိုင်းထိ ၀င်ရောက်စုံစမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ၀င်ရောက်စီးနင်းဖို့ ယခင်က ၂ ကြိမ်ကြိုစားခဲ့ပေမယ့် မိန်းကလေးငယ်ကို မတွေ့တဲ့ အတွက် အခု တတိယအကြိမ်မြောက်မှာမှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
မနေ့က ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ထဲမှာ လိင်အလုပ်သမားအမျိုးသမီး စုစုပေါင်း ၁၂၁ ဦး၊ အဲဒီထဲမှာ ထိုင်းက ၂၁ ဦး၊ မြန်မာ ၅၃ ဦး၊ တောင်ပေါ်သား ၂၆ ဦး၊ လာအိုနိုင်ငံသား ၁၁ ဦး ၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၁ ဦး ၊ အသက် ၂၀ အောက် ၉ ဦး (ထိုင်း ၂၊ မြန်မာ ၄ ၊ လော ၁ ၊ တောင်ပေါ်သား ၂ ) ဦး ပါဝင်ကြောင်း နိုင်းဖိရိယက ပြောပါတယ်။
၁၈ နှစ်အောက် မိန်းကလေးမှာ စုစုပေါင်း ၇ ဦးရှိကာ မြန်မာမိန်းကလေးက ၅ ဦး တောင်ပေါ်သားက ၂ ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါမိန်းကလေးအားလုံးကို ထပ်မံစစ်ဆေးပြီး တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သူ၊ ဥပဒေမှ တားမြစ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ၊ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူ စသဖြင့် အမျိုး အစားပြန်လည်ခွဲထုတ်ပြီး အရေးယူခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း နဲ့ ကယ်တင်ခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Nataree Massage Enteratainment အနှိပ်ခန်းဟာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် လိင်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပါ လုပ်ကိုင်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံတဲ့အတွက် လုပ်ငန်း ရှင်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ အရေးယူခံရမှာဖြစ်သလို လူကုန်ကူးမှုပါ ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရော ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းများအားလုံးပါ သိမ်းပိုက်ခံရဖွယ်ရှိတယ်လို့ ငွေမည်းခ၀ါချမှုနှိမ်နင်းရေးဌာန တာဝန်ရှိသူ နိုင်းမာနက ပြောပါတယ်။
သိမ်းဆည်းရမိတဲ့အထောက်အထားတွေထဲမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်း (ရဲ) တွေကို လာဘ်ထိုးထားတဲ့ ငွေလွဲစာရင်းတွေပါ တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် အဆိုပါဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ဆက်လက်အရေးယူဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ဒီလူကုန်ကူးမှု တားဆီးတိုက်ဖျက်ရေးဟာ ထိုင်းဒုဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရ၀စ် ၀ုန်းဆုဝမ်း နဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး အနုဖုန်းဖောင်ကျင်းဒါး တို့ရဲ့ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီး ရှေ့ဆက်လည်း တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ နှိမ်နင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ လူကုန်ကူးမှု မသင်္ကာဘွယ်ရာရှိရင် ဖုန်းနံပါတ် ၁၅၆၇ ကို ၂၄ နာရီ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲစနစ်ကို ပြောင်းလဲသင့်ပြီလို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Harvard တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း မြန်မာသုတေသီ တဦးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ – ကလေးတိုင်း အခြေခံပညာ သင်ကြားခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ကိုလည်း အစိုးရအနေနဲ့ ပညာရေး အသုံးစရိတ်ကို မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထောက်ပြခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆင်းရဲသားကလေးငယ်တွေ နိုင်ငံတကာအဆင့် ပညာရေးသင်ကြား နိုင်ဖို့ ကျောင်းတည်ထောင်နေသူ မလှလှဝင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မနန္ဒာချမ်း က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း တက္ကသိုလ်ဝင် ၁၀ တန်းအောင်စာရင်းတွေ စနေနေ့ကပဲ ထွက်ခဲ့တာပါ။ ဒီအချိန်ဟာ ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရော၊ မိဘတွေအတွက်ပါ ရင်ခုန်စိတ်အလှုပ်ရှားဆုံးအချိန်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းမှာတော့ – ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွေကို ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနတွေမှာ ဖြေဆိုသူဦးရေဟာ ၆ သိန်း ၃ သောင်း ၆၂၃၇ ဦးရှိခဲ့ပြီး၊ ၁ သိန်း ၉ သောင်းကျော် အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း (၂၉ ဒဿမ ၉၂) ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီစာရင်းအရ ၁၀ တန်းမအောင်တဲ့ ကလေးအရေအတွက်က ၄ သိန်းကျော်လောက် ရှိနေတာပါ။ ဒါဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အားနည်းတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ပြသနေတာဖြစ်ပြီး၊ ဒီအောင်စာရင်းကြောင့် လူတယောက်ရဲ့ဘ၀ကို အများကြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်မျိုးကို ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Harvard တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းလည်းဖြစ်၊ ဆင်းရဲသားကလေးငယ်တွေ နိုင်ငံတကာအဆင့် ပညာရေးသင်ကြား နိုင်ဖို့ ကျောင်းတည်ထောင်နေသူ မလှလှဝင်း က ထောက်ပြခဲ့တာပါ။
“ကျနော်တို့ဆီမှာ အဲဒီစနစ်ကြီးက လွဲနေတာ။ ၁ ဘာသာကျယုံနဲ့ အကုန်ကျသွားတဲ့ စနစ်ကြီးပေါ့နော်။ အဲဒါကိုပဲ မိဘတွေမှာလည်း ရင်းလိုက်ရတာ အများကြီး၊ ကျောင်းသားတွေမှာလည်း ရင်းလိုက်ရတာ။ မိဘတွေကတော့ သူတို့ရင်းလိုက်ရတာ ပိုက်ဆံပဲပေါ့နော်။ ကျောင်းသားတွေမှာကျတော့ – တက်လူငယ်အချိန်လေ။ လူငယ်ဆိုတာ ဘ၀မှာ အရမ်းကို မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ တက်နေတဲ့အချိန်မှာ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာရော၊ လူကြီးတွေကလည်း သူတို့အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုပျက်စီးသွားတာ၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရမ်းအရမ်းကို ဆိုးယုတ်သွားပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီပေတံတလွဲကြီးနဲ့ တိုင်းတာတဲ့ အခါမှာ ထပ်လွဲသွားတာမျိုးပေါ့နော်။ တချက်လွဲသွားတာနဲ့ လူငယ်တွေဘ၀မှာ တော်တော်လေး ထိခိုက်ရတာ။ ကျမကတော့ စာမေးပွဲကျတဲ့ ဒီစနစ်ကြီးကို ပြန်ပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်။ နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင် အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံးလို့ပြောနေတဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် စာမေးပွဲလည်းမရှိဘူး။ အိမ်စာလည်း မပေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်တွေ အတွေးအခေါ်တတ်အောင် သင်ပေးတာ အဓိကပဲ။ သူတို့က ဘယ်လို တွေးခေါ်တတ်ရမယ်ဆိုတာပဲ သင်ပေးတာ။ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းတတ်အောင်၊ တွေးခေါ်တတ်အောင်၊ သူ့ခြေထောက်ပေါ် သူ ရပ်တည်တတ်အောင် ဒါပဲ အဓိက သင်ပေးတယ်။ အဲတော့ မြန်မာပြည်က ဒီပေတံကြီးကို အရမ်းကြီး အလေးမထားကြဖို့ပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီပေတံကြီးလည်း လွဲနေပါတယ်။ လွဲနေတဲ့ ပေတံကြီးကိုလည်း ပြင်ကြပါဦး။ နောက်တခုက မိဘတွေရော၊ ကျောင်းသားတွေပါ ဒီပေတံအလွဲကြီးကို သိပ်ပြီး အာရုံမထားကြဖို့ပေါ့နော်။”
တချိန်တည်းမှာပဲ – မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပညာမသင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေ အများကြီးရှိနေတယ်လို့ မလှလှဝင်း က ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ ကလေးအရေအတွက် သန်း ၁၂၀ ကျော်ရှိပြီး၊ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ – လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်ခံရမှု အပါအ၀င် ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု၊ စရိတ်မြင့်မားမှု၊ မတရား ဆက်ဆံမှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်လို့ – အမေရိကန်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ HRW ကနေ ကြာသပတေးနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ “ပညာရေးလိုအပ်ချက်” လို့ အမည်ပေး ထားတဲ့ စာမျက်နှာ ၈၅ မျက်နှာပါ အစီရင်ခံစာထဲမှာ – ထောက်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ ဆင်းရဲပြီး ကျောင်းစရိတ် မတတ်နိုင်တာဟာ အဓိက အကြောင်းအရင်း ဖြစ်တယ်လို့ မလှလှဝင်း က ဆိုပါတယ်။
HRW အဖွဲ့ရဲ့ ကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သုတေသီ အယ်လန် မာတင်နဇ် (Elin Martinez) ကတော့ – ကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပဋိဥာဉ်စာချုပ်နဲ့ တခြား နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်တွေကို အစိုးရတွေအားလုံးက လက်မှတ်ထိုးထားကြပေမဲ့လည်း ကျောင်းစရိတ်မတတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဒါတွေကို အခြေခံအဆင့်မှာကတည်းက ဖယ်ရှားပစ်ကြရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ပညာရေးကဏ္ဍမှာ ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာတွေကိုတော့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ကနေ ၁၆ ရက်နေ့အထိ နော်ဝေနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ညီလာခံမှာ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးကြဖို့လည်း ရှိပါတယ်ရှင်။
Myanmar has suffered more from natural disasters this past decade than almost any other country in the world. The years to come may be no different.
According to statements from Tesla Motors and SpaceX CEO Elon Musk, life as we perceive it is almost definitelyaSimulation where humans are just ‘characters’ ina‘video game’ controlled by advanced alien civilizations. Musk said that “There’saone in billions chance we’re in base reality.”
Monday 20 June 2016 20.43 ED
အခု မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကို တစ်ကိုယ်ကောင်း စီးပွါးရေး လုပ်ကွက် တွေ မပျောက်ဖို့ ပထမ ငွေ နဲ့ ပေါက်တယ်၊ နောက်တော့ ခင်မင်ရာ (လူ) တိုက်တွန်းခိုင်း တယ်၊
မရတဲ့ အဆုံး လူ ကို ခြိမ်းခြောက်လာတယ်။
အမှန်တရား မဖြစ်အောင် အကြောက်တရား နဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေတာ လက်တွေ့ မြင်လာရပြီ။
ဘယ်လောက်ထိ ရောင့်တက်ရဲ မလဲ တော့မသိ။ အတော်လေးတော့ ခံပြင်းစရာပါဘဲ။
လုပ်ငန်းရှင် တွေ က ရော ကိုယ့်လူမျိုး အစစ် ဟုတ်ရဲ့လားတောင် မသိပါ။
တကယ်တော့ ဒါမျိုးတွေ ဟာ ကမ္ဘာ နေရာအနှံ့ဘဲ။
မြန်မာပြည် တစ်နေရာထဲ မဟုတ်။
ဒါပေမဲ့ တရားရေးစိုးမိုးတဲ့၊ အာဏာရှိသူက မဟုတ်တာမလုပ်ရဲတဲ့ နေရာမှာ ခြိမ်းခြောက်လို့ မရဘူး။
အဲဒီလို ခြိမ်းခြောက်တာဟာ ဘာ အတွက်တဲ့လဲ။
တရုတ် ဆို မျက်လုံးတောင် မော်မကြည့်ရဲ သူတွေ ရဲ့ အမျိုး ဘာသာ အတွက်တဲ့လား?
မကွေး က ရေနံတွင်းတွေ၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်း တွေကြောင့်လား?
အဲဒီလို မတရားမှု နဲ့ ချမ်းသာသူတွေ က ငွေကို ရေလို သုံး တာတွေ မြင်ရချိန် ကျန်သူ တွေ က လဲ ငွေ ကို အလွယ် ရချင် သုံးချင်လာတယ်။
အဲဒီ အထဲ ငွေရလွယ် တဲ့ သင်္ကန်းဝတ်စုံ ဝတ်သူတွေ များလာတော့ ဘာသာရေး မှာ နာမည်ပျက်ပါတယ်။
စစ်တပ်ဝတ်စုံ ဝတ်ရရင်ဘဲ အနိုင်ကျင့်လိုင်စင် ရသလို ဖြစ်လာတာမို့ စစ်တပ် မှာ နာမည်ပျက်ပါတယ်။
ဒီလိုဘဲ ကျောင်းဆရာ၊ ဈေးသည်၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ တရားသူကြီး၊ အခွန်ဝန်ထမ်း၊ စာရင်းစစ် နယ်ပယ် အသီးသီး မှာ ငွေ အတွက် လိုက်ကြရင်း နာမည် အပျက်ခံနိုင်လာကြတယ်။
ပျက်တာ တွေ အတွက် အပြစ်ရှိပါရက် နဲ့ အရေးယူမှု အားနည်းတာကြောင့် အပြစ် မရဘဲ လွတ်နေတာ တာများလာချိန်
မဟုတ်တာ၊ မမှန်တာ၊ စည်းကမ်းဖောက်တာ တွေဟာ သာမာန်လိုဖြစ်သွားတာ ရိုးရိုးလေး ဘဲ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
အဲဒီ လို နယ်ပယ် အနှံ့ နာမယ်ပျြက် မတရားမှု တွေ ရှိနေပါရက် ဘာလို့ များ “ဘာသာရေး” တစ်ခုထဲ ကွက်ပြီး မဲ နေကြလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမရ။
လူတွေ ရဲ့ စည်းစိမ် ဥစ္စာ တပ်မက်မှု တွေ အတွက် အဲဒီလို လက်နက် အဖြစ်သုံး နေကြတဲ့ အထဲ “ဘာသာရေး” လဲ တန်ဆာခံ အဖြစ် ပါတာကို မြင်အောင် မြင်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်။
မဟုတ်ဘဲ အဖျားပိုင်းလေး လှုပ်တာဘဲ သွားမဲ နေရင် တကဲ့ ပြသနာ အရင်း ပျောက်နေလိမ့်မယ်။
ယူအက်စ်မှာ မာဖီးယားတွေခေတ်စားတုံးက… အဲလိုပဲ…
အမှန်အကန်လုပ်လိုတဲ့..အစိုးရအရာရှိတွေ.. ၀န်ထမ်းတွေ.. အသတ်ခံရသပေါ့..။
FBI ကိုထောင်…။ မဘသ.. အဲ..အဲ.. KKKနဲ့.. မာဖီးယားတည့်ပေးလိုက်သဗျ..။
J Edgar Hoover Targets the KKK | Mafia vs. KKK | American Heroes …
It may have been personal, but whatever the reason, Hoover was soft on the Mafia, but not on the KKK in trying to bring them to justice.
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်မှာ တရားမ၀င် နယ်မြေကျူးကျော်ပြီး ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်နေသူတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံနေရတယ်လို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်မိုးညို က ပြောပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေက အသိမိတ်ဆွေတွေကနေတဆင့် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ မကွေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို က ပြောပါတယ်။
“ကျနော့်ဆီကို တိုက်ရိုက်သတ်မယ်ဖြတ်မယ် ဆိုတာတော့ မရှိဘူး၊ သူတို့စီးပွားရေးကို ထိခိုက်လို့ရှိရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့လေ၊ နည်းနည်းလေးခြိမ်းခြောက်တဲ့ သဘောမျိုးလေးပြောတာပေါ့၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာတေ့ာ မပြောလိုဘူးဗျ”
အဲဒီလိုခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ အခြေအနေကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ သိရှိအောင် အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုဟာ စီးပွားရှာနေတယ်ဆိုပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ လှုံ့ဆော်တဲ့စာရွက်တွေကို မကွေးမြို့ဗိုလ်ချုပ် ပန်းခြံအနီးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်မှာ ဖြန့်ဝေနေတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ မကွေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင် တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင် ဝန်ကြီးချုပ်က တာဝန်ခံမှာဖြစ်ပြီး ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ လိုအပ်ရင်လည်း နှုတ်ထွက်ပေး မှာဖြစ်တယ် လို့ ဒေါက်တာအောင်မိုးညို က ပြောပါတယ်။
အဲဒီလှုံ့ဆော်စာတွေကို ဘယ်သူတွေဖြန့်ဝေနေတယ်ဆိုတာ မသိရှိရသေးကြောင်း ဒေါက်တာအောင်မိုးညို က ပြောပါတယ်။
အရင်မကွေးတိုင်းအစိုးရလက်ထက်က ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကျောင်းတော်ရာကျေးရွာမှာ တိုက်နယ် ဆေးရုံတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ဘဏ္ဍာငွေချထားပေးခဲ့တာကို အခုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုခက်ခဲ့တဲ့ သရက်တောကျေးရွာမှာ ပြောင်းရွှေ့ဆောက်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတာကို မကျေနပ်သူတွေ ရှိနေတယ် လို့ ဒေါက်တာအောင်မိုးညို က ပြောပါတယ်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို ကို RFA သတင်းထောက် မဝေမာထွန်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
EU referendum: UK votes to leave EU
The UK has voted byanarrow margin to leave the European Union after 43 years in an historic referendum.
Leave wins the referendum and the UK will quit the European Union
UKIP leader Nigel Farage declares “independence day”
Turnout UK-wide was 72%
Pound tumbles to lows not seen since 1985, stock market to open at 08:00 BST
ဗြိတိသျှ များ ကတော့ ဥရောပသမ္မဂ ကနေခွဲထွက်လိုက်ပြီ။
ခွဲရေး ခေါင်းဆောင်များ ရဲ့ အစွန်းစိတ် နဲ့ ဘယ်လောက်စွမ်းမယ်တော့ မသိ။
အူကြောင်ကျား နိုင်ငံ(ဥပမာ.. ဂရိနိုင်ငံ… )လိုတွေ.. EUထဲပါနေမှတော့.. သူတို့အတွက်.. ငွေတွေအချောင်ဝင် စိုက်ပေးနေရမယ့်အစား.. ပြတ်ပြတ်သားသားခွဲလိုက်တာ.. သဘာဝကျပါတယ်..။
First Brexit – PM resigned
Second Brexit – Manager resigned
Roy Hodgson has resigned as England manager after his side’s 2-1 defeat by Iceland saw them knocked out of Euro 2016.
7 Day Daily တောင်းပန်စာ
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလက်လက်မှာ နိုင်ငံရေး၏ အကျဉ်းသားမရှိစေရဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာ မူဝါဒနဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ကျွန်တော်တို့က ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော့ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စာရင်းဇယား အရ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ကတော့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မူဝါဒအရ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဥပဒေနဲ့အညီ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေအပေါ်မှာ အရေးယူခံရတာ တွေကိုပဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် လက်ခံပါတယ်။
– MOI Webportal Myanmar
June 26 at 9:05pm ·
အသစ်ပေါ်ထွန်းလာသည့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့အတွက် ရက် ၁၀၀ မှသည် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များ
02.07.2016 05:57 | VOA
“အရပ်သားအစိုးရ ဦးဆောင်မှုနဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက် အရိုးစွဲလာတဲ့ ဗျူရိုကရေစီယန္တယားကြား ပြင်းထန်တဲ့ အားပြိုင်မှုတွေရဲ့ ရလဒ်အဖြစ် မူဝါဒနဲ့ ချဉ်းကပ်နည်းတွေ ဒွန်တွဲနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကို ဟန့်တားထားတဲ့ မူဘောင်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ အုပ်ချုပ်နုိုင်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်လွှားနုိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ အပြုအမူနဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုအတွက် အချိန်ယူရမယ်ဆိုပေမယ့် ဦးစားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။”
ဒါပေမဲ့ အတွေးအခေါ် ပြောင်းရမဲ့ အထဲ သူတို့ အတွေးအခေါ် တွေ ကိုလဲ ပြောင်းရတော့မယ်။
ကမ္ဘာ မှာ အရင်က လူများစု ကနေ လူနည်းစု အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ခဲ့ ကြတာမို့ မတရား ခံရသူ တွေ အပေါ် အကာအကွယ်ပေးလာကြတယ်။
အခုချိန်မှာ တစ်ချို့ လူနည်းစု တွေ က အဲဒီ အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး လူအများ ရဲ့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ကို ဖျက်စီးဖို့ လုပ်လာကြတာကိုလဲ မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ မျက်စိဖွင့် အတွေးအခေါ် တွေ ရှိဖို့ လိုလာပြီ။
နှစ်ဖက်လုံးထဲ မှာ မတရားမှု ကို နှစ်သက် တဲ့ လူ တွေ ရှိတတ်တာကို မြင်သင့်ပြီ။
အခုမှာတော့ လူ အခွင့်အရေး ဆိုပြီး မျက်စိပိတ် အော်နေသူ တွေ ဟာ သူတို့ အလုပ်အကိုင် တည်မြဲ နိုင်ဖို့ အတွက် တရားမျှတမှု ကို မမြင်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာသမား တွေ လို့ သက်သေပြ သလိုဖြစ်လာနေပြီ။
လူ တွေ ကို ဆွနေတဲ့ အထဲ မှာ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်း တွေ ထဲ က တစ်ချို့ လဲ ရှေ့တန်းက ပါတယ်။
ယူကေ က အီးယူ က နေ ခွဲထွက်ဖို့ အားများသွားတာ ဟာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ ကို လိုတာထက်ပိုပြီး ရှေ့တန်းတင်ပြ နေတာလို့ ယူဆကြတာမို့ ပါဘဲ။
အဲဒါနဲ့တင် မျိုးချစ်အစွန်းရောက်များ ခေါင်းထောင်ဖို့ အခွင့်ရလာခဲ့တာပါ။
ဂျော့ဘုရ်ှအကြီး.. စော်ကားခံရပြီးတဲ့နောက်.. ဘုရ်ှအငယ်မွှေလို့.. “ပွ”ထွက်လာတဲ့.. အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကို.. မွတ်စလင်နိုင်ငံ(အင်ဒိုနီးရှား) မှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့.. မွတ်စလင်အဖေရဲ့သား.. သမ္မတအိုဘားမားက.. ထပ်ဆင့်ပညာပြလိုက်သမို့.. အဲဒါ.. အဲဒါတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ.. မြင်မိတယ်..။
ခရစ်ရှန်နဲ့.. မွတ်စလင်ရဲ့.. မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့.. ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအဆက်တွေပဲ..။
ကြားထဲက.. ဗုဒ္ဓသာသနာနာမယ်ကြီးသုံးပြီး.. မြန်မာပြည်ထဲက.. အူကြောင်ကျား.. မဘသတွေဝင်ပြီး.. ကမ္ဘာ့သမိုင်းတရားခံဝင်လုပ်ကြတာကိုတော့.. အံ့သြ..။
ဒါတွေဒါတွေ.. ပြောလည်းပြောချင်.. မပြောလည်းမပြောရက်..။
မြန်မာ့ဂဇက်ကို… ယခုလထုတ်မှစ၍ ရန်ကုန်တွင် အခမဲ့ စဖြန့်မည်ဖြစ်ကြောင်း..။
၇၊၇၊၁၆ နေ့တွင် စီတီးမတ်များနှင့် ကုန်တိုက်များတွင် ရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း..။
မြန်မာပြည် ကြော်ငြာ ဗားရှင်း နဲ့လား သူကြီး။
စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ။ Well Done and many congratulations!
လောလောဆယ်တော့.. ယူအက်စ်ကအတိုင်း ချွတ်စွတ်ထုတ်ဦးမယ်..။
မူလအိပ်မက်.. မြန်မာ့ဂဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို.. သတင်းရောင်း/၀ယ်နေရာဖြစ်အောင်…. ပြုစုပျိုးထောင်တော့မယ်တွေးနေတာပဲ..။
သဂျီးမင်းဆီ ကွန်ဂရက်မှာ ရေးမရလို့ ဒီမှာရေးတာ
ညာဘက်အပေါ်က သဂျီးရဲ့ ‘လုပ်ချင်လုပ် မလုပ်ချင်နေ’
ပုဒ်မ ၁၁ က –
တောင်းပန်စာ၊ ကျေးဇူးတင်လွှာ ကြော်ငြာ တိုင်စာများ ကိုဖိုရမ်တွင် ရေးကြပါရန်
ဆိုတာက ကိုဖိုရမ် ကြီး လိုက်ရှာတာ မတွေ့ကြာပေါ့
ဘယ်ထန်းတော ရောက်နေလဲမှ မသိတာ
မရှိရင်လဲ ဖြုတ်လိုက်ပါ ဗျာ
သဂျီး သဘောနဲ့တင် ရတာပဲ
ဒီကိစ္စက ၇၅% အထက်ထောက်ခံမှုမှ မလိုတာ
သိတဲ့ အတိုင်းဘဲ နိုင်တီး ဂွမ်တီး ကတော့ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် ပေါ့ ကိုနိုရေ။
အခုတော့ ဟိုဟို ဒီဒီ နေရာပြောင်း အပြီး တစ်နေမှာ ကျပျောက်သွားတာထင်ပါ့။
ပုဒ်မ ၁ က နေ ၁၂ ဘယ် ပုဒ်မ ကများ ချိုးဖောက်သူမရှိ အာဏာတည်မြဲ စွာ ရှိနေတယ်လို့ ထင်တုန်း။
ဘယ်သူမှ မလိုက်နာတဲ့အတူတူ..ေ-ာက်မြင်ကတ်ပုဒ်မလို.. လိုတဲ့အချိန်မှ ထုတ်သုံးလို့ရအောင် ထားထားတယ်..။
ရွာသူားဟောင်းတွေလည်း.. အသစ်ကလေးတွေကို.. အာဏာပါဝါ ပြလို့ရသပေါ့…။
ဒါက.. ဒီလိုဆိုပြီး.. လျှို့ဝှက်တနေရာရာမှာပဲ.. ရှိနေသလိုလို… နတ်ပြည်ပဲတက်ကပ်နေသလိုလို..